29 Aprily 2016
TSIKY RAKOTOMAVO, VAHININ'NY PÔETAWEBS
Tsiky Rakotomavo dia Lehiben'ny Sampandraharaha Misahana ny Teny sy Soratra ao amin'ny Ministeran'ny Kolontsaina sy ny Asatanana (MKA). Niandraikitra ny tsikeran'ny boky navoaka tamin'ny Rombom-panahy 2 izy, niaraka tamin'i Ra-Phi (Sandratra ao Antsirabe). Izy ihany koa no efa nitsikera ny Rombom-panahy 1 niaraka tamin'i Nalisoa Ravalitera sy Niry-Solosoa ary Ranoe. Nanatona azy ny Pôetawebs, araka izany, ka namaliany ireo fanontanian'i Toetra Ràja.
Miarahaba anao tompoko. Raha tsy mahadiso dia sitrakay Pôetawebs ny hanontany anao ny zava-nitranga tamin'ny fotoanan'ny tsikera tamin'iny Rombom-panahy 2 tany Antsirabe iny.
Miarahaba anao Toetra Raja.
Efa nitsidika ny tranokalan'ny Pôetawebs aho amin'ny fikarohana ataoko ary efa tsy vaoavao amiko ny anarana.
Misaotra tompoko. Ahoana ny fahitanao ny kalitaon'ny boky?
Tsara ny kalitaon'ny boky.
Nisy fivoarana ve raha ampitahaina tamin'ilay andiany voalohany?
Efa nisy fivoarana be ny endriky ny hetsika amin'ny maha sahoby azy.
Ampy ve ny fotoana nomena anao mialoha ny andron'ny tsikera?
Ny fanomanana sy fikarakarana ny antsipiriany dia tokony ho efa am-bolana mialoha mba tsy hisian'ny antomotra be. Ho ahy manokana mantsy, fohy loatra ny fotoana nanomanako ny tsikera (3 andro) kanefa tsy Rombom-panahy fotsiny no asako.
Amin'ny ankapobeny, inona no fahombiazana sy lesoka azo tsoahina?
Nandritra ny tsikera izay nataonay sy Ra-Phi dia nadringa kely satria nanantena ny hisian'ny mpianatra maromaro aho. Somary nizara fahalalana kely mikasika ny literatiora ihany mantsy aho nandritra ny tsikera, ka tsy dia nahafa-po ahy loatra ny fahavitsian'ny olona. Tsikera ihany mantsy no nandehanako tany an-tany lavitra tany sy nahafoizako fotoana sy vola. Saingy tiana ilay soratra ka tsy dia nahoana loatra izany.
Raha misy ny andiany fahatelo, inona no fepetra tokony ho raisina ho fanatsarana ny kalitaony?
Ny soso-kevitra fanatsarana nataoko ho amin'ny hetsika manaraka dia ny hifotoran'ny hetsika amin'ny tononkalo hatrany, na fifaninana dihy, na hira. Tsy voatery hamorona tononkalo foana no fifaninanana atao fa ny miantsa, manao fihetsika. Ny mamorona feo miainga avy amin'ny tononkalo dia azo atao avokoa.
Ahoana ny fahitanao ny fomba fanoratra ankehitriny?
Ny tsy fifehezana ny tsipelina no tena hitako lesoka be amin'ny fanoratana ankehitriny, tena mila arenina haingana fa manimba ny teny malagasy.
Misaotra indrindra, Tsiky Rakotomavo, nahafoy fotoana nandray sy namaly ny fanontanian'ny Poetawebs.